Nepali Christian Bible Study Resources - छोराछोरी हुर्काउने सम्बन्धमा केही विचारहरू
» इसाई घर-परिवार » छोराछोरीको तालिम » परिचय
छोराछोरी हुर्काउने सम्बन्धमा केही विचारहरू
तपाईंको छोराछोरी कस्तो बनेको देख्‍न चाहनुहुन्छ? उनीहरूले मुक्ति पाएको, परमेश्वरको सेवा गरेको चाहनुहुन्छ? चाहे गरिब अवस्थामा होस् चाहे धनी अवस्थामा होस् के उनीहरू प्रभुमा आनन्दित रहेको र मानिसहरू प्रति इमानदार भएको देख्‍न चाहनुहुन्छ? यस्तो पुस्ता पनि छ, यस्ता जवानहरू पनि हुन्छन् जसले कसैको पनि आदर गर्दैनन्, न आमाबुबाको न परमेश्वरको वचन टेर्दछन्। हितोपदेश ३०:११-१४ मा बयान गरिएको पुस्ता आज हामी संसारमा देख्छौं।
"यस्तो एउटा पुस्ता छ, जसले आफ्ना बाबुलाई सराप्छ, र आफ्नी आमालाई धन्यकी भन्दैन। यस्तो एउटा पुस्ता छ, हो आफ्नै दृष्टिमा शुद्ध छन्, तर पनि ती आफ्नो मैलाबाट धोइएका छैनन्। यस्तो एउटा पुस्ता छ -- आहा-हा! तिनीहरूका आँखा कति घमण्डले भरिएका छन्! तिनीहरूका परेलाहरू कति चढेका छन्! यस्तो एउटा पुस्ता छ, जसका दाँतहरू तरवारजस्ता छन्, र जसका बङ्गराहरू पृथ्वीबाट दु:खीहरूलाई र मानिसहरूका बीचबाट खाँचोमा परेकाहरूलाई निलिखानका निम्ति छुरीजस्ता छन्" (हितोपदेश ३०:११-१४)।
तपाईंका केटाकेटी यस दुष्ट पुस्तामा सामेल नहोस् भनेर के तपाईंले दृढ निर्णय गर्नुभएको छ? संसारका विचारहरू र सांसारिक व्यवहारबाट छोराछोरीलाई जोगाउनलाई के तपाईंले कुनै कदमहरू चाल्नुभएको छ? "तर मेरो छोरा, मेरो छोरी सानो छ" भनेर ढुक्क नबस्नुस्। एक चोटि राम्रोसँग विचार गर्नुस्। यदि तपाईंको छोरा अहिले सानो हुँदा तपाईंले भनेको मान्दैन भने के ऊ ठूलो भएपछि तपाईंले उसलाई लागू पदार्थ खानबाट रोक्न सक्नुहुन्छ? अहिले तपाईंको छोरीले झगडा गरेर चक्लेट माग्दा तपाईंले दिनुहुन्छ भने ऊ ठूली भएपछि गलत किसिमको लुगा लाउनलाई झगडा गर्छे भने तपाईंले कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? तपाईंको सानो छोराले तपाईंलाई हिर्काउँदा तपाईं हाँस्नुहुन्छ भने ऊ ठूलो भएर तपाईंलाई मार्ने धम्की दिएपछि तपाईं त्यतिबेला के गर्नुहुन्छ? "मेरो छोरो सानो छ, ऊ आफै सुध्रिन्छ, बुझ्ने भएपछि मानिहाल्छ" भनेर नसोच्नुस्। पापको जरा, जुन बालकको हृदयमा छ, कहिले पनि आफै हराएर जाँदैन। यदि पापलाई रोकिएन भने पाप बढ्दै जान्छ, कम भएर जाँदैन। हृदयमा भएको पाप येशूले मात्रै धुनुहुन्छ। तर यदि तपाईंको छोराछोरी तपाईंकै अधीनमा बस्दैनन् भने कसरी उनीहरूले आफूलाई ख्रीष्टको अधीनमा सुम्पन्छन्? बाइबलमा बालकहरूका निम्ति केवल दुइटा आज्ञाहरू मात्रै दिइएका छन्। "हे नानीहरूहो, प्रभुमा आफ्ना बुबाआमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित छ। 'आफ्ना बुबाआमालाई आदर गर,' जो चाहिँ प्रतिज्ञासहितको पहिलो आज्ञा हो, 'र तिम्रो भलाइ होस् र यस पृथ्वीमा तिम्रो आयु लामो होस्' (एफेसी ६:१-३)। सत्य यो हो कि कुनै बालकलाई छाडा छोडियो भने उसले यी आज्ञाहरू मान्नेछैन। यी आज्ञाहरू उसले आफ्नो शक्तिले मान्नेछैन। आफ्नो छोराछोरीलाई यी आज्ञा मान्न लगाउनु अभिभावकको कर्त्तव्य हो। केटाकेटीलाई सानैदेखि अनुशासनमा राख्‍नु जरुरी छ। "सानैदेखि" भन्नाले, ७-८ महिनाको उमेरदेखि नै। यदि अभिभावक छोराछोरीलाई अनुशासनमा राख्‍न ३-४ वर्ष पर्खन्छ भने ढिलो भइसकेको हुन्छ। अनुशासनको जग जीवनमा चाँडै बसाल्नुपर्छ। यदि ५ वर्षकी नानी उसको आमाले बोलाउनुहुँदा आउँदैन भने उसलाई कसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सिकाउन सक्छ र? यदि ५ वर्षको छोरालाई "यहाँ चुप लागेर बस" भन्दाखेरि मान्दैन भने उसलाई कसरी बाइबलका महान् सत्यताहरू सिकाउन सकिन्छ? उसको आमाबुबाले उसलाई अनुशासनमा राखेको छैन भने ऊ बढ्दै जाँदा उसले आफूलाई अनुशासनमा राख्‍ने छैन, शरीरको अभिलाषा अनुसार हिँड्नेछ।
आजभोलि विश्वासी आमाहरू विश्वास नगर्नेहरूको समाजका भनाइअनुसार आ-आफ्ना वच्चाहरू हुर्काइरहेको देखिन्छ। बाइबलको तरिकाअनुसार छोराछोरीलाई हुर्काउने आमाहरू कम नै देखिन्छ। धेरैजसो विश्वासीहरूका छोराछोरीहरू सांसारिक भएका छन्, उनीहरूको जीवनद्वारा ख्रीष्टको आदर होइन तर अनादर भइरहेको देखिन्छ।
यस्ता आमाहरू कहाँ छन् जसले नम्र भई छोराछोरीलाई हुर्काउने बाइबलीय तरिका सिक्ने प्रयास गरेका छन्? नेपालका मण्डलीहरू प्रायः एक-दुई पुस्ता पुराना छन्। तर अनुभव बटुलेका दिदीहरू कहाँ छन् जो भर्खर विवाहित बिहिनीहरूलाई बुद्धिमानीपूर्वक सल्लाह दिन सक्छन्? यदि तपाईंकै छोराछोरी आज्ञाकारी र अनुशासित छैनन् भने तपाईंले कसरी अरूलाई यस सम्बन्धी सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ? विश्वासीहरूमाझ यो एउटा भयानक समस्या हुन पुगेको छ। आमाबुबाले विश्वास गरेको आधारमा छोराछोरी विश्वासी हुँदैनन्। तर छोराछोरीको मनलाई तपाईंले टेलिभिजन र रेडियोका कुराहरूले भर्नुहुन्छ भने छक्क नपर्नुस् जब उनीहरू ख्रीष्टमा विश्वास गर्दैनन् अनि विश्वास नगरेको केटा वा केटीसँग भाग्छन्।
यदि तपाईंको वच्चा सानै छ भने त्यहाँ ठूलो मौका छ। उसको जीवनलाई अहिलेदेखि ख्रीष्टतर्फ मोड्ने प्रयास तपाईंले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले छोरालाई "हुँदैन" भन्दाखेरि उसले टेर्दैन भने ख्रीष्टले "हुँदैन" भन्नुहुँदाखेरि उसले कहाँ टेर्छ र? तपाईंले छोरीलाई "आऊ" भन्दाखेरि ऊ मान्दिन भने ख्रीष्टले "मेरो पछि लाग" भन्नुहुँदाखेरि उसले पछ्याउँछी र? त्यसैले तपाईंले अनुशासनको जग आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा बसाल्नुपर्छ। केही तरिकाहरू यहाँ दिइएका छन् जसद्वारा अनुशासनको शुरुआत हुन सक्छ।
« चाबी पदहरू
एक बर्ष मुनिको बच्चालाई सिकाउने तीनओटा कुराहरू (भाग १) »